Mutsva Wemagetsi Khibhodi ine Kubata ID | Ndinobva mac
Mutsva Wemagetsi Khibhodi ine Kubata ID
Manuel Alonso | 20/04/2021 20:22 | Noticias
Apple yaApril 20 chiitiko, pakati pechirimo, chave chiri chiratidzo chevara uye zvishandiso zvitsva izvo kambani yakaratidza. Tinobvumirana kuti zhinji dzeguhwa dzakazadzikiswa, asi kambani yakashamisika neimwe gadget nyowani. Semuenzaniso, akatitaridza neiyo Nyowani Yemagetsi Khibhodi ine Kubata ID iyo inouya mushanduro mbiri.
Pamwe chete neMac itsva yakamirirwa kwenguva refu yaive yakamirirwa nemoyo wese nevashandisi vese, keyboard nyowani yakarova zvitoro zveApple. Zvinotaridza kuti hazvina basa asi isu tiri kutaura nezve kuvandudzwa kweMicrosoft Keyboard iyo isina kuvandudzwa makore mashoma apfuura.
Iyo kambani yakafumura nyowani yemashiripiti kiibhodhi ine mivara mitsva, Bata ID, uye nyowani makiyi eEmoji, Kutarisa, Usakanganisa, uye yako Mac yekukiya.
Iyo peripheral ikozvino inofambidzana nemakomputa matsva zvakare akaunzwa mune avo mumvuri, pamusoro pekutora imwe yakatenderera chimiro. Iyo vhezheni iyo yakasimba yakashambadzirwa kusvika zvino, yakabhabhatidzirwa seMicrosoft Keyboard 2, yakavhurwa muna 2015, kubva panguva iyoyo yagara isina yekuvandudza.
Pamwe chete neMicrosoft Keyboards, Apple yakagadziridzawo Mouse yeMagic uye mashiripiti trackpad kuti iwedzere mamwe mavara esarudzo. Kunyangwe Apple ichizopa iyo yeMicrosoft Keyboard uye Magic Mouse neiyo iMac nyowani, hazvizivikanwe kuti vhezheni dzakagadziridzwa dzichadhura zvakadii padzakatengwa zvakasiyana.
Tichafanirwa kumirira kuti tione kuti mutengo unoiswa nekambani pazvinhu izvi kana zvotengwa zvakasiyana. Ndinovimba havakwire zvakanyanya pamuzambiringa, sezvavanotaura, uye kuti inogara nemutengo mumwe chete wataive nawo kusvika ikozvino nemhando dzapfuura.
Sezvinobvumwa, ndeimwe yemakona akanakisa ane Apple. Nyore, yakashongedzwa uye yakanaka kwazvo uye ikozvino inoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mutsva Wemagetsi Khibhodi ine Kubata ID
watchOS 7.4 mune yayo Regedza Musarudzo vhezheni yava kuwanikwa
Isu pakupedzisira tichava neApple AirTags